#myanmar Trending Posts - HiveLIST
ဘယ်လိုလဲ Hive ဈေးတက်အုံးမယ် မို့လား ကိုယ်တွေ မနေ့ညက hive ဈေး သွားကြည့်သည်။ coinmarketcap မှာ Hive က $1 ဖြစ်နေသည်။ မျက်လုံးပွတ်ကြည့်၊ နောက်တခါ ထပ်ကြည့် ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် တစ်ဒေါ်လာဖြစ်နေသည်။ ဟုတ်နေပါပြီး သေ
ပိုပိုဆိုးလာနေတဲ့ သီရိလင်္ကါ မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေဆိုးပြီးလို့ထင်ထားခဲ့တယ်။သီရိလင်္ကါနိုင်ငံက ကျတော်တို့ထက်ကိုဆိုးရွားနေပါတယ်။သီရိလင်္ကါပြည်တွင်းမှာ အစာရေစာတွေလဲ ပြတ်လပ်နေပါပြီး နိုင်ငံခြားကနေအခ
အနောက်နိုင်ငံတွေ NATO ထဲဝင်ကြပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ရုရှားနောက်တစ်ဆင့်မှာ ဘာလုပ်သွားမယ်ဆိုတာကို တော်တော်လေးလန့်နေကြပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေတင်မကပါဘူး NATO ကိုယ်တိုင်လဲ လန့်နေရပါတယ်။အခုဆို အနောက်နို
My teddy. Oh he is nice. because he is not smile😕.